Mataanaha Shabakada Dhaqdhaqaaqa Gawaarida Korantada Korantada Survey
Mataanaha Shabakada Dhaqdhaqaaqa Gawaarida Korantada Korantada
Laga bilaabo sanadka 2021, waxaa jiri doona shabakad cusub oo xamuul qaada gawaarida xamuulka ee Mataanaha Magaalooyinka, oo ay kujiraan khidmadaha isticmaalka dadweynaha. Shabakaddan waxaa weheliya adeegga wadaaga gaadhiga korantada. Waxaad ka fikiri kartaa wadaagista gaariga sida wadaaga gaari dariskaaga iyo kaliya wadista gawaarida marka qaabab kale oo gaadiid aysan u qalmin baahiyahaaga.
Mashruucan waa dadaal iskaashi ah oo hadafkiisu yahay in la kordhiyo xulashooyinka gaadiid ee nadiifka ah ee dadka ku nool aagga Mataanaha ah, kordhinta sinnaanta gaadiidka, iyo kordhinta saldhigyada lacag bixinta ee dadweynaha laga heli karo.
Waxaan qireynaa saameynta aan habooneyn ee wasakheynta iyo isbedelka cimilada ee shaqsiyaadka hantida yar iyo dadka midabka leh. Saameyntani waxay sii xoojineysaa culeyska midab-takoorka qaabdhismeedka ah ee shakhsiyaadka beesheena maalin kasta la kulma. Waxaan si gaar ah u dooneynaa inaan fahano baahida nabadgelyada iyo waaritaanka bulshadaada ee kaa caawin kara adeegsiga gawaadhidayada korontada. Dhageysiga xubnaha bulshada ee ku saabsan mowduucyadan waxay naga caawin doontaa inaan qaabeyno adeeg ka tarjumaya baahiyaha iyo rabitaanka bulshadayada.
Sidee u shaqeyn doontaa?
Faahfaahin asaasi ah oo ku saabsan mashruuca:
Safar hal-waddo ah: Xubnaha wadaaga gawaarida ayaa ka qaadi kara oo ka degi kara gawaarida meel kasta oo ka mid ah aagga adeegga (oo qiyaastii ah 35 mayl laba jibaaran). Xubnaha waxay qaadan karaan socod hal-ama labo-dhinac ah, mar alla markay gaariga ku tuuraan baarkin sharciyeed goobta adeega.
Ku dhawaad ​​70 xero oo qaali ah: Waxaa jiri doona 3 ilaa 4 xamuul gawaarida korantada oo laga heli karo xarun kasta. Qaar ka mid ah alaabadaas waxaa loo hayaa xubnaha baabuurta la wadaaga, qaarna waa loo heli doonaa dadweynaha.
In ku dhow 150 gawaarida la wadaago koronto ayaa heli doona xubnaha si ay u isticmaalaan 24/7. Waxaad keydin kartaa gaari walba ugu badnaan 72 saacadood.
Qiimo daqiiqad-daqiiqad ah oo ah khidmad yar oo bishii ah
Codsashada xubinnimada HOURCAR waxaa loo baahan doonaa in la isticmaalo gawaarida-wadaagida gawaarida. Qof kasta oo leh rikoor fiican oo wadis oo 18 18 sano ah oo haysto ugu yaraan liisan baabuur ugu yaraan wuu dalban karaa. Waxaan sameyneynaa barnaamij si sahlan loo isticmaali karo si nidaamkan looga dhigo mid ku habboon.
Waxaan qabanay kooxaha xallinta si ay nooga caawiyaan qaabeynta mashruucan, oo hadda waxaan rabnaa inaan wax kaa maqalno! Fadlan naga caawi inaan ka dhigno shabakaddan sida ugu wanaagsan ee ay ugu noqon karto bulshadaada adiga oo ka qaybqaata sahanka soo socda.
Sahanku wuxuu qaadan doonaa 5 ilaa 10 daqiiqo. Waad ku mahadsan tahay horay!
Ogeysiiska Siidaynta ee Muhiimka ah:
Magaalada Saint Paul waxay aruurineysaa macluumaadkan si ay ugu wargaliso mashruuca iskuxirka dhaqdhaqaaqa Gawaarida Gawaarida Mataanaha ee mataanaha. Macluumaadka aad soo gudbiso waxaa loo kala saari doonaa xogta dadweynaha waxaana lala wadaagi doonaa shakhsiyaadka codsanaya macluumaadka. Magaalada Saint Paul waxay la wadaagi doontaa xogta sahamintan la-hawlgalayaasha mashruuca, oo ay kujirto Magaalada Minneapolis. Fadlan la soco in aan lagaaga baahnayn inaad bixiso wax macluumaad shakhsiyeed ah, iyo in haddii aad doorato inaad nala wadaagto emaylkaaga annaga si aad u hesho wixii ku saabsan mashruuca aan la sheegi doonin.